ट्राफिक प्रहरीले पूर्वयुवराज पारस शाहलाई समेत नछाडेपछी …. || सुनौलो नेपाल
ट्राफिक प्रहरीले पूर्वयुवराज पारस शाहलाई समेत नछाडेपछी ….
थापाथलीका दुई–तीन ट्राफिक गाडी रोकेर नजिकै पुगेपछि गाडीको सिसा झार्दै चालक बोले, ‘ह्वाट ह्यापन्ड ?’ ट्राफिकले कागजपत्र मागे । चालकले सहजै उपलब्ध गराए । एक ट्राफिकले भने, ‘गाडीको नम्बर पनि स्पष्ट देखिँदैन त ?’ चालक गाडीबाट ओर्लिएर नम्बर प्लेटमा लागेको माटो टालोले सफा गरे ।
चालक गाडीबाट झर्नेवित्तिकै जाममा परेका मोटरसाइलकमा सवारहरु चिच्याए, ‘पारस शाह ।’ त्यसपछि त सडकमा हल्लीखल्ली नै भयो । जावलाखेल चोकबाट प्रहरीले निगरानीमा राखेका ति चालक पूर्व युवराज पारस शाह थिए । गाडीमा उनी एक्लै थिए ।
ट्राफिक नियमको बेवास्ता गर्दै तीव्र गतिमा गाडी हाँक्ने पारस ट्राफिकको फन्दामा परेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
पारसले तीव्र गतिमा चलाएको बा।१४ प २१३१ नम्बरको गाडी प्रहरीले समातेको हो ।
जावलाखेलदेखि हुँइकिएका उनलाई जावलाखेल प्रहरीले सोमबार थापाथलीमा नियन्त्रणमा लिएको हो ।
ट्राफिकले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको र माग्दा नदिएको, प्रहरीले लाइसेन्स नदिएपछि पारसले आक्रोसित हुँदै ‘तैंले मलाई चिन्नुपर्छ’ भनेको तर ट्राफिक प्रहरीले नदिएको पत्रिकामा समाचार छ ।
अंगरक्षकले बैंकमा पाँच सय जरिवाना तिरेर पारसको ब्लुबुक तथा लाइसेन्स लगेको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
कर्मचारी–भूमाफिया मिलेमतोमा बेचियो मैतीदेवी मन्दिरको जग्गा